Kulan Shaqo abuur loogu sameeyay ilaa 700 oo haween ah - Cakaara News
Kulan Shaqo abuur loogu sameeyay ilaa 700 oo haween ah
Jigjiga(cakaaranews) Isniin, 6da June, 2016 Xukuumada DDSI ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii loo tirtirilahaa loona qalajin lahaa saboolinimada waxayna xukuumadu dajisay qorshayaal cilmiyaysan oo isku dheeli tiran kuwaasi oo lagu hirgalinayo gaadhida horumar waara oo aan soo noqod lahayn.
Haddaba Waxaana maanta shaqo abuur loo sameeyay ilaa 700 haweenka kuwaasi oo ah dadka dan yarta ah oo laga soo kala xulay degmooyinka iyo maamulada magaalooyinka DDSI waxa la daymiyay aduun lacageed oo dha 7.5 millyan birr.
Waxaana maanta kulan la yeeshay haweenka loo furayay fursadaha shaqo masuuliyiin sare oo ay ka mid yihiin madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah marwo Sucaad Axmed Faarax, wasiirku xigeenka xafiiska madaxtooyada DDSI mudane Deeq Cabdilaahi Buraale, wasiir ku xigeenka xafiiska madaxtooyada mudan Ibraahin Aadan mahdi iyo masuuliyiin kale oo heer deegaan ah.
Kulankaasi oo ka dhacay hoolka shirarka ee qaryaan dhoodaan ayaa waxa ugu horayntii ka hadashay madaxwayne ku xigeenka ahna DDSI wasiirka beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee marwo Sucaad Axmed Faarax oo ka warbixisay qorshayaasha iyo istaraatajiyadaha u dajisan xukuumada DDSI ee lagu dabar-jarayo saboolimada. Waxayna sheegtay madaxwayne ku xigeenku in sal u yihiin qorshayaashaasi xoojinta iyo abuuritaanka ilaha shaqada gaar ahaan abuuritaanka ilaha ganacsiga yar yar ee haweenka DDSI si loog baxo saboolimada loona gaadha wadamada uu dhaqaalahoodu meel dhexaadka yahay.
Wasiir ku xigeenka madaxtooyada DDSI mudane Deeq Cabdilaahi Buraale oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in dayntan haweenka la siinayaa ka mid tahay qorshayaasha kor loogu qaadayo kobcinta awooda dhaqaalaha deegaanka gaar ahaana haweenka DDSI si looga guulaysto saboolnimda.
Qaarka ka mid ah haweenka loo abuurayay illaha shaqada ayaa sheegay in ay siwayn ugu mahad naqayaan guud ahaanba xukuumada DDSI iyo XDSHSI waxayna sheegeen in ay muhiimada gaarka ah siiyeen kor u qaadida nolosha dhaqaalaha haweenka DDSI.
Maaha markii ugu horaysay ee ay xukuumada DDSI u abuurto haweenka DDSI gaar ahaan kuwa danyarta ah illo shaqo ee waxa shaqo abuur loo sameeyay sanadihii ugu danbeeyay haweena aad u tiro badan kuwaasi oo ay hadda noloshooda dhaqaale marayso meel aad u saraysa.